God the Son - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Andriamanitra, zanaka
Andriamanitra Zanaka no Olona faharoan’ny Andriamanitra, naterak’ny Ray hatrizay hatrizay. Izy no teny sy endrik’ny Ray amin’ny alalany ary ho Azy no naharian’Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nirahin’ny Ray Izy amin’ny maha-Jesosy Kristy, Andriamanitra, naseho tao amin’ny nofo mba hahatonga antsika hahazo ny famonjena. Notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina izy ary naterak’i Maria Virjiny, Andriamanitra feno sy olombelona tanteraka, nampiray toetra roa tao amin’ny olona iray. Izy, Zanak’Andriamanitra sady Tompon’ny zavatra rehetra, dia mendrika ny homem-boninahitra sy hivavahana. Amin’ny maha-mpanavotra ny olombelona naminaniana azy, dia maty noho ny fahotantsika Izy, natsangana ara-batana tamin’ny maty ary niakatra ho any an-danitra, izay nanaovany ho mpanelanelana eo amin’ny olombelona sy Andriamanitra. Ho avy indray amim-boninahitra Izy mba hanapaka ny firenena rehetra amin’ny maha-Mpanjakan’ny mpanjaka ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. (Johanes 1,1.10.14; Kolosiana 1,15-16; Hebreo 1,3; John 3,16; TITOSY 2,13; Matthew 1,20; Asan'ny Apostoly 10,36; 1. Korintiana 15,3-4; Hebreo 1,8; Apokalypsy 19,16)
Ny fanontaniana momba ny maha-izy antsika izay ifandraisantsika eto dia dia ny fanontanian'i Jesosy mihitsy amin'ny mpianany hoe: "Iza moa no milaza fa ny Zanak'olona?" Ho antsika dia mbola misy ifandraisany amin'izao: Iza ity lehilahy ity? Fahefana manao ahoana no ananany? Nahoana isika no tokony hatoky azy? Jesosy Kristy no ivon'ny finoana kristiana. Tsy maintsy tiantsika ny mahatakatra hoe olona manao ahoana izy.
Ny olombelona rehetra - sy ny maro hafa
Teraka ara-dalàna i Jesosy, nihalehibe ara-dalàna, noana sy nangetaheta ary reraka, nihinana sy nisotro ary natory. Nijery ara-dalàna izy, niteny fiteny mahazatra, nandeha ara-dalàna. Nanana fihetseham-po izy: mangoraka, tezitra, talanjona, alahelo, tahotra (Mat 9,36; Lioka 7,9; John 11,38; Matio 26,37). Nivavaka tamin’Andriamanitra araka ny tokony ho izy ny olombelona. Niantso ny tenany ho lehilahy izy ary nantsoina hoe lehilahy. Olombelona izy.
Olona niavaka anefa izy ka taorian’ny niakarany tany an-danitra, dia nisy nandà fa tsy olombelona izy (2. Jaona 7). Nihevitra izy ireo fa masina aoka izany i Jesosy ka tsy nino fa misy ifandraisany amin’ny nofo, ny loto, ny hatsembohana, ny fandevonan-kanina, ny tsy fahatanterahan’ny nofo. Mety ho olombelona ihany izy, satria ny anjely indraindray dia miseho ho olombelona nefa tsy tena tonga olombelona.
Mifanohitra amin'izany, ny Testamenta Vaovao dia manazava mazava: Jesosy dia olombelona tonga lafatra amin'ny teny manontolo. Nanamafy i Johannes:
“Ary ny teny dia tonga nofo...” (Jaona 1,14). Tsy vitan’ny hoe “niseho” tamin’ny maha-nofo azy izy fa tsy “nitafy” nofo fotsiny. Tonga nofo Izy. “Tonga tamin’ny nofo” i Jesosy Kristy (1 Jao. 4,2). Fantatray, hoy i Johannes, satria izahay no nahita azy sy nikasika azy (1. Johannes 1,1- iray).
Araka ny voalazan’i Paoly, dia tonga “tahaka ny olona” i Jesosy (Filipianina 2,7), “Vita eo ambanin’ny lalàna” (Galatiana 4,4), “tamin’ny endriky ny nofo ota” (Romana 8,3). Ilay tonga hanavotra ny olona dia tsy maintsy tonga olombelona amin’ny maha-olombelona, ​​hoy ny nambaran’ny mpanoratra ny Taratasy ho an’ny Hebreo: “Satria nofo aman-drà ny zaza ankehitriny, dia nanaiky izany koa Izy ... rahalahy amin’ny zavatra rehetra » (Hebreo 2,14- iray).
Mijoro na mianjera ny famonjena antsika raha tena nisy tokoa Jesosy - ary misy. Ny anjara asany amin’ny maha-mpisolovava antsika antsika, dia ny mpisoronabentsika, dia mijoro na lavo, na efa niaina ny fanaon’olombelona tokoa izy (Hebreo). 4,15). Na dia taorian’ny nitsanganany tamin’ny maty aza, dia nanana nofo sy taolana i Jesosy ( Jaona 20,27:2; Lioka ).4,39). Na dia tao amin'ny voninahitra any an-danitra aza dia mbola olombelona ihany izy (1. Timoty 2,5).
Manaova fihetsika tahaka an'Andriamanitra
“Iza moa izy?”, hoy ny fanontanian’ny Fariseo, rehefa nahita an’i Jesosy mamela heloka. "Iza no mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra irery ihany?" (Lioka 5,21.) Fahatafintohinana amin’Andriamanitra ny ota; ahoana no ahafahan'ny olona miteny ho an'Andriamanitra ka milaza fa voafafa ny fahotanao, voafafa? Fitenenan-dratsy izany, hoy izy ireo. Fantatr’i Jesosy ny fihetseham-pon’izy ireo momba izany, ary mbola namela ny fahotany izy. Nilaza mihitsy aza izy fa afaka tamin’ny ota ny tenany (Jao 8,46). Nanao fanambarana mahagaga izy:
Nilaza i Jesosy fa hipetraka eo an-kavanan’Andriamanitra any an-danitra izy - filazana iray hafa fa nahita fitenenan-dratsy ny mpisorona jiosy6,63-65).
Nilaza ny tenany ho Zanak’Andriamanitra izy - fitenenan-dratsy ihany koa izany, hoy izy, satria tao amin’io kolontsaina io izay tena midika hoe manandra-tena ho an’Andriamanitra (Jao. 5,18; 19,7).
Nilaza i Jesosy fa nifanaraka tanteraka tamin’Andriamanitra izy ka izay sitrapon’Andriamanitra ihany no nataony (Jao. 5,19).
Nilaza izy fa iray amin’ny Ray (Jaona 10,30), izay noheverin’ny mpisorona jiosy ho fitenenan-dratsy koa (Jaona 10,33).
Nihambo ho tena Andriamanitra tokoa izy ka izay mahita azy dia hahita ny Ray4,9; 1,18).
Nilaza izy fa afaka mandefa ny Fanahin’Andriamanitra6,7).
Nilaza izy fa afaka mandefa anjely3,41).
Fantany fa Andriamanitra no mpitsara an'izao tontolo izao ary tamin'izany fotoana izany dia nilaza fa nomen'Andriamanitra fitsarana azy
natolotra (Johanes 5,22).
Nilaza izy fa afaka manangana ny maty, anisan’izany ny tenany (Jao 5,21; 6,40; 10,18).
Nilaza izy fa ny fiainana mandrakizay ho an’ny tsirairay dia miankina amin’ny fifandraisany aminy, dia i Jesosy (Mat 7,22- iray).
Nilaza izy fa tsy ampy ny teny nolazain’i Mosesy (Mat 5,21- iray).
Niantso ny tenany ho Tompon’ny Sabata izy - lalàna nomen’Andriamanitra! (Matio 12,8.)
Raha olombelona ihany izy, dia fampianarana feno fahasahisahizana sy feno fahotana izany. Nanamafy ny teniny tamin’ny asa mahagaga anefa i Jesosy. «Minoa Ahy fa Izaho ao amin’ny Ray ary ny Ray ato amiko; fa raha tsy izany, dia minoa Ahy noho ny asa” (Jaona 14,11). Ny fahagagana dia tsy afaka manery na iza na iza hino, fa mbola afaka ho "porofo ara-tontolo iainana" matanjaka.
Mba hampisehoana fa nanana fahefana hamela heloka Izy, dia nanasitrana lehilahy malemy Jesosy (Lio. 5: 17-26). Ny fahagagana nataony dia manaporofo fa marina izay nolazainy momba ny tenany. Manana mihoatra ny herin'olombelona izy satria lehibe noho ny an'ny olombelona. Ny fiheverana momba ny tena - miaraka amin'ny fanevatevana rehetra - dia nifototra tamin'ny fahamarinana tamin'i Jesosy. Afaka niteny toa an Andriamanitra izy ary afaka nanao toa an Andriamanitra satria Andriamanitra tao amin ny nofo Izy.
Fantatr’i Jesosy mazava tsara ny maha izy azy. Tamin’ny roa ambin’ny folo taona dia efa nanana fifandraisana manokana tamin’ny Ray any an-danitra izy (Lio 2,49). Tamin’ny batisany dia nandre feo avy tany an-danitra izy nanao hoe: Zanako malalako ianao (Lio 3,22). Fantany fa manana iraka hotompoina izy (Lio 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).
Ho valin'ny tenin'i Peter, "Ianao no Kristy, Zanak'Andriamanitra velona!" Jesosy namaly hoe: «Sambatra ianao ry Simona, zanakalahin'i Jona; fa tsy nofo aman-drà no nanambara anao izany, fa ny Raiko Izay any An-danitra »(Matio 16: 16-17). Jesosy dia Zanak'Andriamanitra. Izy no Kristy, ilay Mesia - ilay nohosoran'Andriamanitra ho iraka manokana.
Rehefa niantso mpianatra roa ambin'ny folo Izy, ny iray ho an'ny firenen'ny Isiraely dia tsy niisa ny roa ambin'ny folo lahy izy. Ary ambonin'izy ireo dia ambonin'izy rehetra noho ny Isiraely rehetra. Izy no namorona sy nanorina ny Isiraely vaovao. Tamin 'ny fanasan'ny Tompo dia naneho ny tenany ho fototry ny fanekena vaovao, fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra. Izy dia nihevitra ny tenany ho toy ny fifantohana izay ataon'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao.
Jesosy dia sahy nanohitra ireo fomban-drazana, nanohitra ny lalàna, nanohitra ny tempoly, ary tamin'ny mpitondra fivavahana. Nangataka ny mpianany handao ny zava-drehetra izy ary hanaraka azy, mba hametraka azy ho loha laharana amin'ny fiainan'izy ireo, hitazonana azy mahatoky tanteraka. Niresaka tamin'ny fahefan'Andriamanitra izy - ary niaraka tamin'ny fahefany ihany.
Nino i Jesosy fa tanteraka taminy ny faminaniana ao amin’ny Testamenta Taloha. Izy no mpanompo nijaly izay tokony ho faty hamonjy ny olona amin’ny fahotany3,4-5 & 12; Matio 26,24; marika 9,12; Lioka 22,37; 24, 46). Izy no Andrian’ny fiadanana izay niditra tao Jerosalema tamin’ny boriky (Zakaria 9,9- 10; Matio 21,1-9). Izy no Zanak’olona izay nomena ny hery sy ny fahefana rehetra (Daniela 7,13-14; Matio 26,64).
Ny fiainany teo aloha
Nilaza i Jesosy fa niaina talohan’i Abrahama ary naneho izany “tsy mety lany andro” izany tamin’ny fomba fiteny mahazatra: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Fony tsy mbola ary Abrahama, dia Izy Aho” (Jaona. 8,5faha-8). Nino indray ny mpisorona jiosy fa mandray ny zava-masina eto Jesosy ka te hitora-bato Azy (and. 59). Ny teny hoe "izaho" dia toa izany 2. Mosesy 3,14 izay nanambaran’Andriamanitra ny anarany tamin’i Mosesy: “Lazao amin’ny Zanak’Isiraely hoe: [Izy] ‘Izaho’ no naniraka ahy ho atỳ aminareo.” ( Dikan-tenin’i Elberfeld). Jesosy dia mitondra an'io anarana io ho an'ny tenany eto.
Jesosy dia nanamafy fa “fony tsy mbola ary izao tontolo izao” dia nizara voninahitra tamin’ny Ray Izy (Jaona 17,5). Milaza amintsika i Jaona fa efa nisy izy tamin’ny fiandohan’ny andro: tahaka ny Teny (Jao 1,1). Ary koa ao amin’ny Jaona isika dia afaka mamaky fa “ny zavatra rehetra” dia natao tamin’ny teny (Jao 1,3). Ny raim-pianakaviana no nanao drafitra, ilay teny hoe mpamorona izay nanatanteraka izay nokasaina. Ny zavatra rehetra dia noforonina ho Azy sy ho Azy (Kolosiana 1,16; 1. Korintiana 8,6). Hebreo 1,2 milaza fa Andriamanitra no “nanao izao tontolo izao” tamin’ny alalan’ny Zanaka.
Ao amin’ny Hebreo, toy ny ao amin’ny Taratasy ho an’ny Kolosiana, dia voalaza fa “mitondra” izao rehetra izao ny Zanaka, ary “misy” ao aminy izany (Hebreo). 1,3; Kolosiana 1,17). Samy milaza amintsika fa izy no “endrik’Andriamanitra tsy hita” (Kolosiana 1,15), “Endriky ny tenany” (Hebreo 1,3).
Iza moa i Jesosy Izy dia Andriamanitra tonga nofo. Izy no Mpamorona ny zava-drehetra sy andrianan’ny fiainana (Asan’ny Apostoly 3,15). Tena mitovy amin’Andriamanitra izy, manana voninahitra toa an’Andriamanitra, manana hery be dia be izay tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Tsy mahagaga raha nanatsoaka hevitra ny mpianatra fa Andriamanitra izy, dia Andriamanitra tao amin’ny nofo.
Mendrika ny hivavahana
Tsy araka ny natoraly mihitsy no nitomboan’i Jesosy (Mat 1,20; Lioka 1,35). Niaina tsy nanota mihitsy Izy (Hebreo 4,15). Tsy nisy tsiny, tsy nisy tsiny Izy (Hebreo 7,26; 9,14). Tsy nanota izy (1 Pt 2,22); tsy nisy ota tao aminy (1. Johannes 3,5); tsy nahalala ota izy (2. Korintiana 5,21). Na dia mafy aza ny fakam-panahy, dia nanana faniriana mafy kokoa hankatò an’Andriamanitra foana i Jesosy. Ny asa nanirahana azy dia ny hanao ny sitrapon’Andriamanitra (Hebreo 10,7).
Imbetsaka ny olona no nivavaka tamin’i Jesosy4,33; 28,9 u. 17; John 9,38). Tsy mamela ny tenany hotompoina ny anjely (Apokalypsy 1 Kor9,10), saingy navelan’i Jesosy izany. Eny, mivavaka amin’ny Zanak’Andriamanitra koa ny anjely (Hebreo 1,6). Nisy vavaka natao tamin’i Jesosy (Asa 7,59-60; 2. Korintiana 12,8; Apokalypsy 22,20).
Ny Testamenta Vaovao dia midera an’i Jesosy Kristy amin’ny fomba avo indrindra, miaraka amin’ny fombafomba natokana ho an’Andriamanitra: “Ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay! Amena »(2. Timoty 4,18;
2. Petrus 3,18; Epifania 1,6). Izy no mitondra ny anaram-boninahitra ambony indrindra amin’ny maha-mpanapaka azo omena (Efes 1,20-21). Tsy tafahoatra loatra ny fiantsoana azy hoe Andriamanitra.
Ao amin’ny Apokalypsy dia mitovy ny fiderana an’Andriamanitra sy ny Zanak’ondry, izay maneho ny fitoviana: “Ho an’izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana sy ho an’ny Zanak’ondry anie ny dera sy ny haja sy ny dera ary ny hery mandrakizay mandrakizay!” (Epifania 5,13). Ny zanaka dia tsy maintsy omem-boninahitra toy ny ray (Jao 5,23). Andriamanitra sy Jesosy dia antsoina koa hoe Alfa sy Omega, ny fiandohana sy fiafaran’ny zavatra rehetra (Apokalypsy 1,8 & 17; 21,6; 22,13).
Ireo andinin-tsoratra masina momba an'Andriamanitra dia matetika ao amin'ny Testamenta Vaovao ary ampiharina amin'i Jesosy Kristy. Ny iray tena mahavariana dia ity andalan-teny momba ny fanompoam-pivavahana ity: «Izany no antony nanandratan'Andriamanitra azy azy ary nanome azy ilay anarana ambonin 'ny anarana rehetra, izany hoe amin'ny anaran'i Jesosy
Aoka hiankohoka izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany ary ambanin’ny tany, ary aoka ny lela rehetra hanaiky fa Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitr’Andriamanitra Ray.” (Filipianina) 2,9-11, teny avy ao amin’ny Isaia 45,23). Nomena an’i Jesosy ny haja sy ny fanajana izay nolazain’i Isaia fa tokony homena an’Andriamanitra.
Milaza i Isaia fa iray ihany no Mpamonjy, dia Andriamanitra ( Isaia 43:11; 45,21). Nilaza mazava i Paoly fa Andriamanitra no Mpamonjy, fa Jesosy koa no Mpamonjy (Tit1,3; 2,10 ary 13). Misy Mpamonjy ve sa roa? Ny Kristianina voalohany dia nanatsoaka hevitra fa ny Ray dia Andriamanitra ary i Jesosy dia Andriamanitra, saingy iray ihany Andriamanitra ary iray ihany no Mpamonjy. Ny Ray sy ny Zanaka dia iray ihany (Andriamanitra), saingy samy hafa.
Andinin-tsoratra masina maro hafa ao amin'ny Testamenta Vaovao koa no miantso an'i Jesosy ho Andriamanitra. John 1,1: "Andriamanitra no teny." Andininy 18: «Tsy mbola nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana; ny hany Andriamanitra sady ao an-tratran’ny Ray no nanambara Azy tamintsika”. Jesosy no Ilay Andriamanitra mampahafantatra antsika ny Ray. Taorian’ny fitsanganana tamin’ny maty, dia nahafantatra an’i Jesosy ho Andriamanitra i Tomasy: “Dia namaly i Tomasy ka nanao taminy hoe: Tompoko sy Andriamanitro!” ( Jaona 20,28 ).
Nilaza i Paoly fa lehibe ny razana satria avy amin’izy ireo “Kristy araka ny nofo, dia Andriamanitra ambonin’izy rehetra sady isaorana mandrakizay. Amena » (Romana 9,5). Ao amin’ny taratasiny ho an’ny Hebreo, Andriamanitra mihitsy no manonona ny zanany hoe “Andriamanitra”: “Andriamanitra, ny seza fiandriananao maharitra mandrakizay mandrakizay ...” (Hebreo). 1,8).
“Fa ao aminy [Kristy]”, hoy i Paoly, “ny fahafenoan’ny fomban’Andriamanitra no itoeran’ny vatana rehetra.” ( Kolosiana. 2,9). I Jesosy Kristy dia Andriamanitra tanteraka ary mbola manana “toetra ara-batana”. Izy no tena endrik'Andriamanitra - Andriamanitra tonga nofo. Raha olombelona ihany i Jesosy, dia tsy mety ny mametraka ny fitokiantsika aminy. Fa satria Andriamanitra izy, dia asaina matoky azy isika. Azo itokisana tsy misy fepetra izy satria Andriamanitra.
Ho antsika, ny maha-Andriamanitra an’i Jesosy dia tena zava-dehibe, satria rehefa avy amin’Andriamanitra Izy vao afaka manambara marina an’Andriamanitra amintsika (Jao. 1,18; 14,9). Olon'Andriamanitra irery ihany no afaka mamela antsika, manavotra antsika, mampihavana antsika amin'Andriamanitra. Ny Olona iray ihany no mety ho lasa fototry ny finoantsika, dia ny Tompo izay mahatoky tanteraka antsika, ilay Mpamonjy izay hajaintsika amin’ny hira sy ny vavaka.
Olombelona marina, dia Andriamanitra tokoa
Araka ny hita avy amin'ireo andinin-teny voalaza, dia ny "sarin'i Jesosy" ao amin'ny Baiboly dia miparitaka manerana ny Testamenta Vaovao manontolo amin'ny vato mosaik. Miray saina ny sary, saingy tsy hita amin'ny toerana iray. Ny fiangonana tany am-boalohany dia tokony ho natsangan'ireo rindrina misy. Nahatsapa ireto fehin-kevitra manaraka ireto avy amin'ny fanambarana ara-Baiboly izy:
Jesosy, zanak'Andriamanitra, dia masina.
Tena lasa olombelona ny Zanak’Andriamanitra, saingy tsy eo ny Ray.
Hafa ny Zanak'Andriamanitra sy ny Ray fa tsy mitovy
Hafa misy andriamanitra iray.
Ny zanaka sy ny ray dia olona roa amin'ny Andriamanitra iray.
Ny filankevitr'i Nicaea (325 AD) dia nametraka ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, sy ny maha-izy azy amin'ny Ray (Nicene Creed). Ny Council of Chalcedon (451 AD) dia nanampy fa lehilahy koa izy:
«[Ka manaraka ny ray masina, isika rehetra dia miara-mampianatra fa i Jesosy Kristy Tompontsika dia Zanaka iray ihany hotompoina; ny iray dia tonga lafatra amin'ny andriamanitra ary tonga lafatra amin'ny zanak'olombelona, ​​ilay tena Andriamanitra marina sy olona tokoa ... Talohan'ny fotoana nateraky ny Ray aorian'ny Andriamanitra ... avy tamin'i Maria, ny Virjiny sy Renin'Andriamanitra (theotokos), teraka [izy] tahaka ny iray ihany, Kristy, Zanaka, tera-tany, tsy mifangaro amin'ny natiora roa ... Ny fahasamihafana eo amin'ny natiora dia tsy foanana velively ho an'ny firaisan-kina; fa kosa, ny mampiavaka ny tsirairay amin'ireo natiora roa dia voatahiry ary mitambatra mba hamorona olona iray ... »
Niampy ny ampahany farany satria nisy ny olona nilaza fa ny toetran'Andriamanitra dia nanosika ny maha-olombelona an'i Jesosy ka lasa tsy olombelona intsony izy. Ny sasany kosa nilaza fa niray saina izy ireo mba hananganana ny toetra fahatelo, ka tsy andriamanitra sy tsy olombelona i Jesosy. Tsia, ny porofo ara-Baiboly dia mampiseho fa i Jesosy dia olombelona ary Andriamanitra rehetra. Ary tokony hampianatra an'izany koa ny Fiangonana.
Ahoana no hahavitan'izany?
Ny famonjena antsika dia miankina amin'ny hoe Jesosy dia sady olona sy Andriamanitra. Saingy ahoana no hahatonga ny Zanak'Andriamanitra masina ho olona maka endrika nofo mpanota?
Ny fanontaniana dia mivoitra indrindra satria ny olombelona araka ny hitantsika izao dia tsy manantena kolikoly intsony. Tsy ity Andriamanitra no namorona azy. Nasehon'i Jesosy antsika ny fomba ahafahan'ny olombelona sy tokony ho ao anaty fahamarinana. Voalohany indrindra aloha dia asehony amintsika ny olona iray izay miankina tanteraka amin'ny rainy. Izay no tokony ho izy amin'ny olombelona.
Asehony amintsika koa izay hain’Andriamanitra. Afaka ny ho anisan’ny zavaboariny izy. Afaka mamehy ny elanelana misy eo amin’ny tsy noforonina sy ny noforonina Izy, eo amin’ny masina sy ny mpanota. Mety hihevitra isika fa tsy ho vita izany; fa Andriamanitra dia azo atao. Asehon’i Jesosy amintsika koa ny ho toetran’ny olombelona amin’ny famoronana vaovao. Rehefa miverina Izy ka atsangana isika, dia hitovy endrika aminy isika (1. Johannes 3,2). Hanana vatana tahaka ny vatany niova endrika isika (1. Korintiana 15,42- iray).
Jesosy no mpamadika lalana antsika, asehony antsika fa ny lalana mankany amin'Andriamanitra dia avy amin'i Jesosy. Satria olombelona olombelona izy, tsapany miaraka amin'ny fahalementsika; satria Andriamanitra izy, dia afaka mahavita manangana antsika eo amin'ny ankavanan'Andriamanitra. Miaraka amin'i Jesosy ho Mpamonjintsika, afaka matoky isika fa azo antoka ny famonjena antsika.